किन १३ लाई अशुभ अंक मानिएको हो ? – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार २१:१४ Basanta Khanal	0 Comments
प्राचीन क्रिस्चियन ग्रन्थहरूका अनुसार येशुलाई शुक्रवारको दिन क्रसमा झुण्ड्याइएको थियो अनि
इभले एडमलाई शुक्रवारकै दिन वर्जित फल खुवाएकी थिइन् । केनले एबललाई शुक्रवार हत्या गरेका थिए । यसैकारण शुक्रवार राम्रो दिन मानिन्न अनि त्यसमा १३ अंक थपिँदा त फ्राइडे द थर्टिन्थ खराबै हुने भयो क्रिस्चियनहरूका लागि ।
← किन हुन्छ क्याप्सुलको रंग दुईथरी ?
कुन आँखा फर्फराउनु शुभ, कुन अशुभ ? →